ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်၏မေးခွန်းဥပဒေနှင့် မညီသောကြောင့် ပယ်ချ၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ရှင်းလင်း - Open Hluttaw
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်၏မေးခွန်းဥပဒေနှင့် မညီသောကြောင့် ပယ်ချ၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ရှင်းလင်း
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖာပွန်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစောထွန်းမြအောင် မေးမြန်းသည့်မေးခွန်းသည် ဥပဒေနှင့်မညီသောကြောင့် ပယ်ချလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ကိုယ်စားလှယ်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားလိုက်သည်။
This entry was posted in Amyotha Hluttaw CommitteesChooseahluttaw sessionGeneralChooseahluttaw sessionHluttaw NewsChooseahluttaw sessionPyithu HluttawChooseahluttaw sessionUncategorized. Bookmark the permalink.
← ဝန်ကြီးရူး ရူးနေသည့် တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ တိုက်ခိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အမည်စာရင်း ရုပ်သိမ်းခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးအဖြစ်မှ အမည်စာရင်းရုပ်သိမ်းခံရသူ ဦးအောင်ကျော်မိုး ပြန်လည် တုံ့ပြန်
အငြင်းပွားနေသော အခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ ကိုပြင်ဆင်တစ်လကျပ်ငါးသိန်းအထက်ရသူများ ဝင်ငွေခွန်ဆောင်ရန် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီတင်ပြ →